PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-09-27 - Ukuya exesheni kwamantombazana lisiko?
Ukuya exesheni kwamantombazana lisiko?
Isolezwe lesiXhosa - 2018-09-27 - IZIMVO - Zonwabele Tshayana
KUMHLELI neqoqo ndisukuma ndichukunyiswa zizimvo ezayanyaniswa noMama uMndende, nalapho athetha ngamadoda angene kwinto yokuqokolela izishubelisi, ngabula yena, esenzela amantombazana, ingakumbi lawo asesezikolweni kwaye asokolayo.
Mandiqale ndithethe ndenze nje: umama uMndende, nofunde de wayityekeza imfundo yaseNtshona, akanalo ilungelo lokukhetha iphela emasini kwizinto zokutshintsha kwenkcubeko nobuntu bethu. Andithi nanku ezibiza ngokuba unguGqirha ngokwezemfundo?
Ayikuko ke ukutshintsha kwezinto zenkcubeko oko? Ungenelelo lwamadoda kule nyewe, kuhamba nokutshintsha kwamaxesha.
Ngamampunge nemvilikitshane yobuvuvu into yokokuba lo nto iyothukwa ngamadoda okwenene, okanye aqotho, xa ngaba kukho indoda ethi yona iqokolela ezi zishubelisi, xa sisebenzisa igama elisetyenziswa nguMama uMndende.
Phofu uqale ngokuzama ukusikatsa esibambile, kuba efuna maze singamphenduli, kuba sisoyika ukuba abantu baza kungqinelana naye bathi asingomadoda okwenyani.
Sisenyeliso nesithuko, Mam’ uMndende, esokuba uthi amadoda abona ingxaki edinga ubambiswano, akungawo amadoda okwenene, ngokunga uyayazi ukuba ubudoda yintoni.
Ukuba sihamba ngentetho yakho, akukho mfazi uyaziyo okokuba ubudoda yintoni, njengoko kungekho ndoda iyaziyo ukuba umfazi wokwenene unjani.
Masingathukani ke, kwaye singenyelisani. Asizokukuyeka uzityel’ itheko, okanye uxhents’ uzombelela, ingakumbi xa indlela ohamba kuyo itenxa.
Ndibuye ndiphendule apha, uthi akukho magqiyazana angayiyo esikolweni ngenxa yokuba esexesheni.
Uthi ngamampunge lawo. Mandikulungise, kuba uphazame ngokugqithisileyo ngokutsho njalo.
Ndiza kubuyisela umva, ndikuse kumnyaka ka2010, ngexa apho bendisebenzela umzi wakwaLove Life, nalapho besisenza iinkqubo zokufundisa umlisela nomthinjana ngobuni bawo, kwakunye neendlela zokuzinakekela nokuziphatha ingakumbi kumabakala ezobuni, ezesondo, impilo namalungelo ngokobuni (Sexual & Reproductive Health Rights and Education).
Ndibuye ndize kumnyaka ka2012 ndisebenza kumzi wakwaAfricare, kwinkqubo eyayijongene nabantwana abahlelelekileyo nabangenabazali, (Orphans and Vulnerable Children).
Ndibuye ndize kumnyaka ka2013, ndixelenga kumzi wakwaSave the Children South Africa, apho bendikwicandelo elijongene nempilo yabantwana ezikolweni (Integrated School Health Program).
Kuyo yonke le minyaka, bendisebenza ngqo nabantwana abahluphekileyo nabahlelelekileyo. Ukungayi esikolweni ngenxa yokungabi nazishubelisi yinto eyenzekayo.
Mna andivi ngondiva, ndithetha into endiyixelelwa ngabantwana ngeyabo imilomo, kwaye ndiyibona nakwimiqulu yokujonga ukuhamba kakuhle kwabantwana isikolo, apho amantombazana aneentsuku ezithile, ezifanayo enyangeni, engayi esikolweni. Sathi sisakuzisa izishubelisi, sabapha, kwakho umnyinyiva.
Le nto ndiyenzile kwiphondo leMpuma Koloni, uMntla Koloni, eGauteng, eNorth West, KwaZuluNatal, futhi akemnyanga, ingeyombinana ethethe kanjalo, luninzi.
Uninzi lwabo luthi kuye kufuneke kukhethwe phakathi kokuthenga ukutya nokuthenga izishubelisi. Wena ke, uthetha ngokukhula kwenu, ngexa apho kungenzeka ukuba izishubelisi ezi zazingaxhaphakanga kuyaphi ebantwini abamnyama, nalapho nanishubela ngezinye ke izinto eziyakuthi zaziwe nguwe kunye nabo bakhule ngelo lixa.
Impazamo yenu ke, ndikuquka ngebom nawe, yeyokuba ezo mfundiso nazityeshela, anisazidlulisi kwabo basazalwayo. Into eniyaziyo kukuthetha xa kukho bani othi athathe inyathelo, phofu nibe ningenzi nto inasihlahla ukulungisa. Ndibuye ndize kumba kaGqirha Mamisa Chabula-Nxiweni yeTara Clamp.
Ndingomnye wala madoda ayesilwa naye ngokuzigqatsa. Amanina anendima nomgama awudlalayo kumba wolwaluko, kwaye oko ewenza elandela imigaqo neziseko ezilawula oko.
Ndikhwankqiswa nto inye apha kuwe, le yokufanisa isiko kwakunye nento edaliweyo ukuba mayenzeke, nengelosiko koko iyinxalenye yempilo.
Ngendikuva ngcono xa ubuzekelisa ngolwaluko ulufanisa nentonjane. Phofu ndilindele ntoni emntwini oyamanisa iimbono ezintle zoncedo oluziswa ngamadoda kunye nokudlwengulwa nokuhlukunyezwa kwamanina?
Uthi xa ngaba sisiza sele sizithengile, sinyhasha amalungelo nesidima samanina? Ngabuni? Ukuya exesheni kuyimfihlo okanye isiko ekungamele laziwe ngamadoda?
Kule meko sele kuyiyo namhlanje, apho amadoda ekhulisa abantwana bawo, wena usaphila kwixesha elithi umsebenzi wendoda ngulo, owomfazi ngulo?
Iyingxaki ke mama uMndende into yakho, kuba uneemini zokufuna ukufundisa abantu ngempilo yamandulo, phofu ikubhide nayo leyo, kuba kwawena lo, uphila impilo yaseNtshona, uyixuba neyakwaNtu.
Xa kuthande wena, ufuna izinto zenziwe ngokwasendulo, xa kuthande wena ufuna zenziwe kwixa langoku.
Andinanxa nawe, koko ingxaki yam kukuba uthanda ukuba yintakampuku amaxa amaninzi.